'उजुरी परेकालाई राख्ने हिरासत मै हो, सगरमाथाको चुच्चोमा राख्न सकिन्न' - Himali Patrika
‘उजुरी परेकालाई राख्ने हिरासत मै हो, सगरमाथाको चुच्चोमा राख्न सकिन्न’
हिमाली पत्रिका १४ माघ २०७६, 2:27 am
सामान्य सिपाही होस् कि कुनै महान सेलिब्रेटी काम प्रतिको आत्मसम्मान सबैको हुनुपर्छ। तल्लो दर्जालाई मुखमा आएभरीको गाली गर्ने संस्कार सामान्ती संस्कार हो, सोच हो। गणतन्त्र आएको हो भने सबैलाई आएको हो। मजदुर मालिक सबै समान हुन्। प्रहरीको जिम्वेवारी हुन्छन् तर नागरिकको कर्तब्य पनि हुन्छन्। फेसबुक लाईभमा आएर तथानाम गा ली गरेकै कारण आस्था राउतलाई प क्राउ गरिएको हो, कुनै गित गाएका कारण हैन। यो भनाइ लेखक तथा पत्रकार दिल निशानी मगरको हो। उनि भन्छन्, ‘उजुरी परेका मानिसलाई प्रहरीले राख्ने हिरासत मै हो। सगरमाथाको चुच्चोमा लगरे राख्न सकिन्न’।
गायिका आस्था राउतलाई प्रहरीले अ भद्र व्य वहारको आरोपमा हि रासतमा राखेको छ । केही दिनअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा उनको सुरक्षाकर्मीसँग विवाद भएको थियो । विवादपछि उनले फेसबुक लाइभ गर्दै प्रहरीलाई गा लीगलौज गरेपछि प्रहरीले उनलाई प क्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
आस्था राउत आज परिवारसँगै प्रहरीमा गएर आत्म समर्पण गरेकी थिइन् । प्रहरीले भने उनलाई चार दिन हिरा सतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सिडिओ कार्यालयसँग अनुमति लिएको छ । यसको अर्थ अब कम्तिमा चार दिन आस्थाले हिरा सतमै बिताउनेछिन् ।
यसअघि कलाक्षेत्रका व्यक्तिहरुले यो विवादमा आस्थालाई खुलेर समर्थन गरेका थिएनन् । तर, प्रहरीमा आफैं गएर आत्मालोचना गरिसक्दा पनि चार दिन म्याद थप गरिएपछि भने उनीहरुले मौनता तोडेका छन् । कुराकानीमा कलाकारहरुले प्रहरीको व्यवहारमा आपत्ति र असन्तुष्टी जनाए ।
प्रहरीको नियतमा प्रश्नचिन्ह उठ्यो
सुरेश अधिकारी – संगीतकार
यो प्रहरीको साह्रै केटाकेटी निर्णय हो । आस्थाले न ड्रग्स बोकेर हिँडेकी हसने, न हातह तियार । न मान्छे नै मा रेको छ । त्यति सानो गल्तीको सजय यत्तिको हुनु हुदैँनथ्यो । यो निर्माणले प्रहरी प्रशासनलाई नै अलोकप्रिय बनाएको छ । प्रहरी प्रशासनलाई अलोकप्रिय र अस्थिर बनाउनको लागि कुनै गिरोहले गरेको चलखेल हुनसक्छ ।
म भन्दिन कि, आस्थाले गल्ति नै गरेको छैन । आस्थाबाट केही गल्ती भएका छन् । त्यो कुरालाई उनले स्विकारेकी पनि छन् । तर, ४ दिनसम्म हिरसतमा राख्नुले त प्रहरीको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । एउटा सेलिब्रेटी माथि भएको यस निर्णयले त राज्यको नै बदनामी गरिदिन्छ ।
यो कुरा मानवअधिकारसम्म पुग्ने हो भने साच्चिकै ठुलो केश हुन्छ । तर, म सबैलाई संयमता अपनाउन आग्रह गर्छु ।
सही वा गलत भन्न सक्दिनँ
प्रमोद खरेल – गायक
प्रहरी भनेको देशको महत्वपूर्ण अंग हो । प्रशासनिक कुराहरु हामीलाई भन्दा पनि उनीहरुलाई नै बढि जानकारी हुन्छ । हामी सर्वसाधरण र कलाकारहरु भन्दा पनि उनीहरु नै त्यसको विज्ञ हुन् । त्यसैले अब अनुसन्धानमा गइसकेको कुरालाई हामीले सही वा गलत भन्ने अधिकार हामीलाई हुन्न । जे हुन्छ, न्यायको काम होस् ।
प्रहरीको असुहाउँदो कारवाही
दीपकराज गिरी – कलाकार तथा निर्माता
फेसबुक लाइभ आएर बोल्नु, रिस देखाउन आस्थाको ग ल्ती हो । तर, त्यो गल्ती यत्तिसम्मको पनि थिएन कि हिरा सतमा नै पुग्नु परोस् । कानुन चुस्तदुरुस्त भएको देशमा त यो कुरा ठिकै होला । तर, हाम्रो देशमा त यो सुहाएन । त्यो माथि वाक स्वतन्त्रता भनेको देशमा बोलेकै भरमा लगेर थु न्नु प्रहरीको गल्ती नै हो ।
एक शब्दमा भन्नुपर्दा ‘झिँगालाई तोप’ भनेजस्तै भएको छ ।
केकी अधिकारी – नायिका
यो कुनै ठुलो अ पराध होइन । यो भन्दा ठुलो ठुलो अपराधहरु हामीले देखेका छौँ । भनाभन भएको हो । तर, प्रहरीसँग भनाभन भएकाले यस्तो रुप लिएको हो । हामी हरेक नेपालीको रिस पोख्ने बानी नै छ । केही भइहाल्यो भने त्यसमा हामी तत्काल प्रतिकृया दिइहाल्छौ । त्यसले पनि हामीलाई हानी गरिरहेको हुन्छ ।
आस्थाको विषयमा उसले गल्ती नै नगरेको भन्ने चाहीँ होइन । ग ल्ती दुबै पक्षबाट भएको छ । यो चिजलाई चाहीँ उहाँहरुले मिलापत्र गरेर माफी मागेर सकाउनु पर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ । यसले त प्रहरी प्रशासनमा विश्वास भन्दा पनि बढि डर पैदा गरिदिएको छ ।
कलाकारहरुको बारेमा वा भनौँ जसको विषयमा बढि लेखिन्छ, पढिन्छ त्यसैको विषयमा प्रहरीले बढि फण्डा गरिरहेको जस्तो लाग्छ । पछिल्लो केही घटनाहरु त्यस्तै नै भएका छन् । कलाकारहरु कुनै न कुनै तवरबाट मुछिनु भएको छ ।
कोही कसैलाई सजाय किन दिइन्छ भन्दा त्यसले उक्त गल्ती पुन नदोहोरियोस् भनेर हो । तर, चाहिने भन्दा सजाय दिइयो भने उसमा मानसिक असर पर्छ, आ क्रोश पैदा हुन्छ । जसले गर्दा उसले पुनः त्यो ग ल्ती दोहोर्याउन सक्छ । यसमा हामी सबै सजग हुन जरुरी छ ।
अनुसन्धान एकपक्षीय भयो
सुरक्षा पन्त – नायिका
पुलिसले एक किसिमको ज्या दती नै गरेको छ । हो मानेँ, आस्था जी बाट ग ल्ती भएको छ । अनुसन्धानको लागि हामीले पनि सहयोग नै गर्नुपर्छ । कानुन भन्दा माथी कोही छैन् । तर, अनुसन्धानको लागि राखिएको हो भने अनुसन्धान केको लागि गर्ने हो भन्ने कुरा पनि त प्रष्ट हुनुपर्यो ।
त्यो माथि अनुसन्धान एक पक्षिय हुदैँन होला । यदी हिरा सतमा राखेर अनुसन्धान गरिन्छ भने दु बै पक्षलाई त्यहीँ राख्नुपर्छ । नत्र त पहुच र पावर देखाएको भन्न सकिन्छ ।
निर्मलाको ह त्या रा खोइ ?
निर्मल शर्मा – कलाकार
ग ल्तीको सजाय त कुनै पनि वर्गका अनि पहुँच भएकाले पनि भागि दार हुनैपर्छ । तर, आ स्थाको भन्दा १००० प्रतिशत बढी अ प राध गर्नेहरु खुलेआम घुमिरहेका हुन्छन् । थाहा छैन कसको तथास्तु हो, नि र्मलाको ह त्या रा खै ? ३३ केजी सुनको ठुलो माछा खै ? यस्ता हजारौ मुद्दाहरुमा तै चुप मै चुप छन् । कानुन सबैलाई लागु हुनैपर्छ न साना न ठुला ।
आस्था राउत त प्र का उ परिन्, अब देशमा भइरहेको लुटतन्त्र, भ्रष्ट्राचार,कमिसनतन्त्र, दादागिरीबि रुद्ध चाहिँ वीरता नदेखाउने ?